Pornhub မှာ AI စနစ်တစ်ခု စတင်ထည့်သွင်း
12 Oct 2017 . 3:40 PM
Artificial Intelligence (သိဉာဏ်တု) တွေ ဟာ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတွေကို အလွန်ထက်မြက်စွာ မှတ်သားသိမြင်နိုင်တာကို အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ။ စမတ်ဖုန်းတွေတွင်ကျယ်လာတာနဲ့အမျှ၊ AI စနစ်ဟာလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း တွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Porn Website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pornhub က machine learning ကို ဗီဒီယို ကတ်တလော့ဂ်တွေမှာ အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်။
ဆိုက်ဟာ Facial Recognition Software ကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ရဲ့ Footage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အပြာမင်းသား၊ မင်းသမီးပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ကို မှတ်သား၊ Tag လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို လက်ရှိ Pornhub မှာတင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုပေါင်း ၅သန်းကျော်ကို “တစ်နှစ်အတွင်း” Scan လုပ်ဖို့ စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး “public” “blonde” စတဲ့ Keywords တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ ရှာဖွေမှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။
ဖော်ပြချက်အရ Pornhub ဒုဥက္ကဌ Corey Price ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ကုမ္ပဏီဟာ AI သုံးတဲ့ Trend ကို အမှီလိုက်လာတာဖြစ်ပြီး “ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို အလျင်အမြန်ပြီးမြာက်စေတယ်” လို့ တင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ PornHub ရဲ့ AI process တွေဟာ လက်ရှိ လူထုအခြေပြုစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်နိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ Beta အနေနဲ့ စမ်းသပ်ထားတဲ့ Machine Learning စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲဟာ ဗီဒီယိုပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကျော်ကို တစ်လအတွင်း Scan လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Facial Technology နည်းပညာကို Porn ဆိုက်မှာ အသုံးပြုတာဟာ Privacy ဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေမယ့် ဒီစနစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ Privacy ကို ထိခိုက်စေနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း Pornhub က ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
Pornhub မှာ AI စနဈတဈခု စတငျထညျ့သှငျး
Artificial Intelligence (သိဉာဏျတု) တှေ ဟာ ဓာတျပုံ၊ ဗီဒီယိုတှကေို အလှနျထကျမွကျစှာ မှတျသားသိမွငျနိုငျတာကို အားလုံးလညျး သိကွမှာပါ။ စမတျဖုနျးတှတှေငျကယျြလာတာနဲ့အမြှ၊ AI စနဈဟာလညျး တဈဖွညျးဖွညျး တှငျကယျြလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး Porn Website တဈခုဖွဈတဲ့ Pornhub က machine learning ကို ဗီဒီယို ကတျတလော့ဂျတှမှော အလိုအလြောကျထညျ့သှငျးနိုငျအောငျ ပွုလုပျထားကွောငျး ထုတျဖျောလိုကျပါတယျ။
ဆိုကျဟာ Facial Recognition Software ကို အသုံးပွုပွီး သူတို့ရဲ့ Footage ပျေါမူတညျပွီးတော့ အပွာမငျးသား၊ မငျးသမီးပေါငျး ၁၀၀၀၀ ကြျောကို မှတျသား၊ Tag လုပျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျကို လကျရှိ Pornhub မှာတငျထားတဲ့ ဗီဒီယိုပေါငျး ၅သနျးကြျောကို “တဈနှဈအတှငျး” Scan လုပျဖို့ စတငျနပွေီဖွဈပွီး “public” “blonde” စတဲ့ Keywords တှပေျေါမူတညျပွီးတော့ ပိုမိုရှုပျထှေးတဲ့ ရှာဖှမှေုတှကေို ထိထိရောကျရောကျရှာဖှနေိုငျဖို့ ပွုလုပျပေးမှာပါ။
ဖျောပွခကျြအရ Pornhub ဒုဥက်ကဌ Corey Price ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ ကုမ်ပဏီဟာ AI သုံးတဲ့ Trend ကို အမှီလိုကျလာတာဖွဈပွီး “ရှုပျထှေးတဲ့လုပျငနျးစဉျကို အလငျြအမွနျပွီးမွာကျစတေယျ” လို့ တငျစားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့၊ PornHub ရဲ့ AI process တှဟော လကျရှိ လူထုအခွပွေုစနဈကို အဆငျ့မွှငျ့နိုငျဖို့အတှကျအသုံးပွုတာတော့ မဖွဈနိုငျကွောငျး သတငျးတှကေ ဆိုပါတယျ။ လကျရှိ Beta အနနေဲ့ စမျးသပျထားတဲ့ Machine Learning စနဈဆော့ဖျဝဲဟာ ဗီဒီယိုပေါငျး ၅၀၀၀၀ ကြျောကို တဈလအတှငျး Scan လုပျထားပွီး ဖွဈပါတယျ။
Facial Technology နညျးပညာကို Porn ဆိုကျမှာ အသုံးပွုတာဟာ Privacy ဆိုငျရာ ရှုပျထှေးမှုတှေ ဖွဈပျေါလာနိုငျပမေယျ့ ဒီစနဈနဲ့ ပတျသကျလို့ Privacy ကို ထိခိုကျစနေိုငျမှာ မဟုတျကွောငျး Pornhub က ပွနျလညျဖွရှေငျးခဲ့ပါတယျ။
by Min Than Htike . 1 day ago